UTim Cook uthetha ngokubaluleka kweyantlukwano kunye nokubandakanywa kwintetho yakhe ka-Auburn | Ndisuka mac
Ewe, ngumxholo ophindaphindayo. Oko kwafika uTrump kwisikhundla sobongameli e-United States, abaphathi abaninzi abaziwayo, abanjengoTim Cook, bathatha lonke ithuba ukubonisa imbono yabo ngokuchasene nomongameli waseMelika. Njengoko sele sazi, Umphathi we-Apple uxhasa ukwahluka kweenkcubeko kwilizwe lakhe nakwilizwe liphela.
Kwintetho enikwe kwiYunivesithi yaseAuburn, wabonisa uCook ukuba asondele ngakumbi kwaye acacile, kwi intetho isihloko "Incoko noTim Cook: umbono wakho wobandakanyo nokwahluka". Kule ntetho, umphathi ophezulu wenkampani yaseCalifornia wayefuna ukucacisa umbono wakhe wokudityaniswa kunye nesiseko samalungelo abo bonke abemi, baseMelika okanye hayi.
Elinye lawona manqaku aphambili kwintetho kukuba, ngokutsho kwakhe, abafundi ababekhona kwakufuneka bazi ngeenkcubeko ezahlukeneyo kwihlabathi liphela.
“Ihlabathi liya lisanda ngakumbi namhlanje, ngakumbi kwiminyaka embalwa edluleyo. Ngenxa yoko, kuya kufuneka ube nokuqonda okunzulu ngazo zonke iinkcubeko kwihlabathi liphela. Ndifundile ukuba ndingayixabisi le nto kuphela, kodwa ndiyibhiyozele. Yintoni eyenza umhlaba unike umdla ziiyantlukwano zethu, hayi ukufana kwethu.«
Ngokukodwa, uCook wathetha ngeApple kunye isebenze njani ngaphakathi ekwakheni inkcubeko esekwe kuyantlukwano, Ukuvumela inkampani efana ne-Apple ukuba isebenze ekudaleni iimveliso ezinkulu.
umpheki Uthethe ngokunyamezelana phakathi kwabantu abasebenza kunye nabemi. Ngale ndlela, wathi:
«Ukuze ukhokele kwiindawo ezohlukeneyo nezibandakanya wonke umntu, Kuya kufuneka uzivumele ukuba ungaziqondi ngokobuqu yonke into eyenziwa ngabantu okanye abayicingayo. Abathethi ukuba into abayenzayo okanye abayicingayo ayilunganga. "
Ngokunokwenzeka, enye yezinto evumela iApple ukuba ibaluleke kakhulu kwaye ifikelele kwinani elikhulu kangaka labathengi, Ngaba ezi zimvo ze-avant-garde njengabo wayefuna ukubonisa kwintetho yakhe kwiYunivesithi yaseAuburn.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UTim Cook ngokubaluleka kweyantlukwano kunye nokufakwa kwintetho yakhe ka-Auburn
I-Skype yeMac ifikelela kwinguqulelo engu-7.50 yokongeza ulwandiso lokwabelana ngefayile